The University of Queensland - Ezemfundo kwezilwandle e-Australia
I-University of Queensland Yokuxhumana
isifinyezo : UQ
abafundi (ngu.) : 51000
Ungakhohlwa xoxa I-University of Queensland
Bhalisa at The University of Queensland
The University of Queensland (UQ) ungomunye ehamba phambili izikhungo zocwaningo kanye nokufundisa Australia sika. Silwela ukwenza kahle ngokwakhiwa, ukulondolozwa, ukudluliselwa nokusebenzisa ulwazi. Ukuze engaphezu kwekhulu, siye ufundile futhi ubehlala njalo esebenzisana nabantu ezivelele ukuze akhulule ubuholi ulwazi izwe elingcono.
UQ lifaka phezulu 50 njengoba kulinganiswe QS World University Amazinga kanye oyisikhulu Performance of Papers Scientific for World Universities. Inyuvesi futhi lifaka 52 in the US IzindabaKhipha ku-internet Global Universities Amazinga, 60 Times Higher Education World University Amazinga kanye 77 ku oyisikhulu Academic World Universities.
ucwaningo ukuma Inyuvesi yomhlaba kwaqokonyiswa ukhetho ezinhlanu UQ scientiststo Australian Academy of Science ngokuphathelene (Aas) e 2015 - Cishe ingxenye yesine yabantu 21 Fellows amasha kanye iningi kusuka yisiphi isikhungo kuleli lizwe.
I Fellows ezintsha ezinhlanu wazihlanganisa neqembu elikhona of 29 ososayensi UQ ungeniswe Aas njengoba Fellows kusukela 1988, ngokuletha inani ingqikithi UQ lezifundiswa abangamalungu omunye academy Australia eziyisithupha ehlonishwayo wafunda ukuba 166.
UQ ungomunye ezintathu kuphela amalungu Australia Universitas global 21, ilungu abaqamba Group of Eight (Go8) amanyuvesi, futhi ilungu Universities Australia.
Yokufundisa nokufunda umsebenzi oncomekayo
bothishela labanemakhono nabanentshisekelo eziyingxenye esemqoka ukuhlinzeka ekufundiseni emihle nokufunda imiphumela kubafundi.
UQ has a kugcilwa kakhulu ekufundiseni umsebenzi oncomekayo, ngokuwina more Awards Australian University Teaching kunanoma yiliphi elinye kuleli lizwe kanye nokuheha iningi Achievers academic eliphakeme kakhulu Queensland sika, kanye kwemibuso phezulu kanye nabafundi kwezilwandle.
The othisha of UQ sizibophezele ekwenteni kahle kakhulu kulokunye ukufunda nakho nemiphumela abafundi babo.
In sekwephuzile 2013, UQ wajoyina edX - Consortium omhlaba anothile of Massive Open Courses Online (Mooca), ngokuhlanganyela owakhiwa Harvard University kanye Massachusetts Institute of Technology (WITH).
UQ kwezimbili kuphela Australian charter ilungu emayunivesithi kufakwe hhayi-for-inzuzo edX ibhizinisi, futhi UQx limelela le nhlangano egameni University. UQx isebenza nabasebenzi University ezifundweni imfundiso ukwakha futhi alethe uhla MOOCs ngokusebenzisa yesikhulumi edX.
UQx has MOOCs eziyishumi egijima ku edX. Enye ezine isakhiwa, esehlanganise izikhonzi kuhlanganise nophenyo zesayensi, ukunakekela impilo, futhi meta-amakhono izifundo baqasheke bebambisene. Kusukela ukukhulula inkambo yayo yokuqala kwi edX ngo-March 2014, UQx ezibhalise ezingaphezu kuka 640,000 ababambiqhaza 219 amazwe.
I UQ Advantage inikeza abafundi ngamathuba, ukukhetha kanye nokwesekwa azobasiza ukuba kuzuzwe izifiso zawo ngamanye, ukuze babe abaholi emikhakheni yabo lokhetsiwe kanye nomthelela omuhle on umphakathi abahlala kuwo. Ngaphezu eguquguqukayo Uhlelo choice, Izinzuzo umfundi zihlanganisa ithuba lokujabulela anhlobonhlobo imisebenzi yangemva ngesikhathi izifundo zabo. Students ukutadisha phesheya, iqhaza izingqungquthela namathuba ocwaningo, ukufinyelela ezingaphezu kuka 190 amakilabhu nezinhlangano, nokusebenzisa zemidlalo kanye namasiko izikhungo.
Ngo 2015, University kwadingeka 50,836 abafundi kuhlanganise 12,666 abafundi international 141 izizwe. It has omunye PhD nokubhalwa ngobukhulu Australia sika, njengoba kungabantu abangaphezulu kuka 13,800 abafundi sebephothulile, futhi kugujwa 12,000th PhD yayo kokuphothula kulesi sikole ngo 2015.
UQ njalo ukuthola abaqhuba izindlela ezintsha kwadaleka nokugcinwa umfundi kanye nokuqashwa. Inyuvesi usebenza towards, athole ngetinjongo tayo tekusebenta ngokuhlakulela izindlela zokwenza abafundi - futhi ngokuphishekela best-practice inductions kanye nakho student.
ezivelele 225,000-plus alumni The University zihlanganisa owathola umklomelo kaNobel, ezimbili Fortune 500 CEO yenkampani, i winner Academy Award, kanye nabaholi kuhulumeni, umthetho, isayensi, inkonzo yomphakathi kanye nobuciko. Inyuvesi igubha alumni zayo njengoba izimpahla zayo omkhulu kunabo. Abakufeza ukwenza University omkhulu - futhi, ukubuya, University uzosebenza kanzima ukuze aqinise idumela layo.
Faculty of Business, Ezomnotho kanye noMthetho
Faculty of Engineering, Ukuklanywa Kwazo Nokutholakala Information Technology
Faculty of Health kanye yokuziphatha Sciences
Faculty of Humanities futhi Isayensi Yabantu
Faculty of Medicine futhi Biomedical Sciences
Iziphakamiso eyunivesithi Queensland lwaluqala 1870s. Ubupristi Bobukhosi Commission 1874, Usihlalo uSir Charles Lilley, Kunconywa ukusungulwa ngokushesha eyunivesithi. Labo ngokumelene eyunivesithi wagomela ngokuthi lobuchwepheshe kunokuba imfundo zezemfundo kwakubaluleke kakhulu i umnotho ubuswa umkhakha eyinhloko. Labo esivuna inyuvesi, ku bebhekene nalokhu kuphikiswa, aziqhelelanisa Oxford University futhi Cambridge University esihlongozwayo esikhundleni umfuziselo lisuselwa uthi maphakathi no-ntshonalanga ye-USA. A yesibili Royal Commission 1891 Kunconywa ukufakwa amandla ezinhlanu eyunivesithi entsha; Ubuciko, Law, Medicine, Isayensi osetshenziswayo Isayensi. Ezemfundo ngokuvamile wanikezwa igunya ongaphakeme e amabhajethi Queensland sika, futhi ekoloni nge rate ekwati 57% e 1861, imfundo yamabanga aphansi ayekukhathalela kuqala kahle ngaphambi imfundo yesibili futhi lobuchwepheshe. Uhulumeni, naphezu okwatholakala ekuqaliseni Ikhomishini Royal, wayengathandi ukuba benze imali ekusungulweni eyunivesithi.
Ngo 1893 eQueensland University Extension Movement, kuqalile yiqembu ngabanye ezizimele owahlela inkulumo izifundo yomphakathi lwemfundvo yalabadzala, enethemba ukuze ajabulise ebanzi ukwesekwa umphakathi for eyunivesithi Queensland. Ngo 1894, 245 abafundi bangena kula amakilasi isandiso izinkulumo zazibizwa ngokuthi esisebenzisekayo nesiwusizo. Ngo 1906 University Extension Movement okuhleliwe University Congress, iforamu kanye nezindawo zokulala zezihambeli nesithakazelo ukukhuthaza umbono walokho okubizwa ngokuthi inyuvesi. Umbono sasigcinwa, fund uqalwe kanye Bill okusalungiswa a Queensland University yalungiswa. Ukucindezeleka sabekwa phezu ezicini zokuphila eyunivesithi kanye nekubaluleka kwalo le commerce yaseQueensland. Inqubo yesiGungu Congress idluliselwe Premier Queensland uWilliam Kidston. Ngo-October 1906, ayisithupha esingamahektare e Victoria Park abangu kugazethi ngezinhloso inyuvesi.
Ngo 1910 imfundiso amandla bokuqala babedalwe. Lezi Engineering kuhlanganisiwe, Classics, Mathematics kanye Chemistry. Ngo-December walowo nyaka ofanayo, Umkhandlu Wezigele esimisiwe ngowokuqala osolwazi ezine;Bertram Dillon Steele kwamakhemikhali, John Lundie Michie e zabuna, Henry James uPriestley kwi-mathematics ne-Alexander James Gibson kwezobunjiniyela. Ngo 1911 abafundi lokuqala wabhalisa. Amakilasi okuqala yeNyuvesi endlini Uhulumeni yayiqhutshelwa 1911 nge 83 Eqala abafundi futhi uSir William MacGregor iyona likaShansela lokuqala (nge Reginald noHebere Roe njengoba likaShansela). Ukuthuthukiswa kwe-University esalibele ngeMpi Yezwe I, kodwa ngemva kwempi yezwe yokuqala ukungena eyunivesithi ngoba ezemfundo nocwaningo wathatha indiza njengoba ukufunwa imfundo ephakeme anda Australia. Ngakho, ku 1920 ekuseni University ezikhulayo kwakudingeka bafune campus ibe banzi njengoba indawo yayo yasekuqaleni ngesikhathi George Street, Brisbane has Igumbi ezilinganiselwe ukunwetshwa.
Ngo 1927, UDkt James O'Neil Mayne udadewabo uMariya Emelia Mayne, enikeziwe isibonelelo cishe £ 50,000 kuya Brisbane City Councilto zithole 274 esingamahektare (111 anakho) sezwe St. Lucia osinikeze lona ukuze University of Queensland nekhaya yayo unomphela. Ngawo lowo nyaka, ukuhlola iphimbo iconsi iqaliswe uProfesa Thomas Parnell. Ukuhlolwa uye wachazwa njengomuntu omdala futhi uyaqhubeka emhlabeni kuze kube namuhla. Ukuntuleka kokukhulumisana ezezimali imisiwe ukuthuthukiswa campus eSt Lucia. Yingakho, ukwakhiwa isakhiwo sokuqala yeNyuvesi eSt Lucia kwakuqala ngo 1938. Kwathi ngokuhamba kwesikhathi uqambe Forgan Smith Isakhiwo, emva Premier kosuku futhi laqedwa 1939. Impi DuringWorld II, the Forgan Smith Isakhiwo lalisetshenziswa njengesibhedlela enkanjini futhi wakhonza kuqala njengoba ekomkhulu eziphambili ukuze Allied Land Amandla e-South West Pacific.
Ngo 1990, Australia kabusha uhlelo lwayo imfundo ephakeme umthetho uhlelo kanambambili emanyuvesi nasemakolishi ka imfundo ephakeme. Ngaphansi kwalolu shintsho, University ihlanganiswe ne Queensland Agricultural College, ukusungula omusha UQ Gatton campus. Ngo 1999, UQ Ipswich laqala ukusebenza njengoba omunye esewonke-Web-amandla ngokuphele e-Australia.
Emagcekeni Ipswich lalakhiwa cishe 20 izakhiwo kanye ezingaphezu kuka 5001 abafundi cishe engu 25 hectares (62 esingamahektare). Izifundo wanikela kuhlanganisiwe: arts, ibhizinisi, imithi kanye nomphakathi wesayensi kanye Ukuxhumana design. Itholakala eduze maphakathi Ipswich, Queensland, nje eningizimu ye-CBD. izimpawu zendawo Eduze zihlanganisa lime Park, Workshop Rail Museum kanye RAAF Base Amberley. Isayithi sihlehlela emuva 1878 ngokuvula egatsheni Ipswich we Woogaroo Lunatic Asylum. Operations kwaqhubeka kwaze kwaba 1910 lapho kwaba Hospital Ipswich ngokuba Insane. Ngo 1938 ke saqanjwa Ipswich Mental Hospital futhi 1964 ke iqanjwe kabusha futhi njengoba Ipswich Special Isibhedlela. Kwakuthinta ekugcineni uqambe Challinor Centre e 1968 behlonipha uDkt. Henry Challinor, Udokotela ohlinzayo le womkhumbi amandla. Kusuka 1968 ukuze 1997 the Challinor Centre wakhonza njengomdala isikhungo kubantu abakhubazekile bokusungula. In sekwephuzile 1997 the Challinor Centre waqala isigaba saso sokuqala ukuguqulwa njengoba entsha UQ Ipswich campus. Ngo 2014, UQ wathengisela Ipswich Campus kuya University of Southern Queensland, bekholelwa ukuthi le mfundiso campus lesifunda yayiyobizwa kangcono esetshenziswa USQ. NgoMeyi 2013, UQ wajoyina edX, i Consortium wezizwe omkhulu evulekile izifundo inthanethi (Mooca). Ngenxa ukuqala ngoMeyi 2014, kokuqala UQxcourses ezine utawufaka hypersonics, tropical yogu, imaging bezokwelapha kanye nesayensi yokucabanga kwansuku.
I-University of Queensland esasungulwa wePhalamende State 10 December 1909 wokukhumbula iminyaka engu-50 ngokwahlukana Queensland kusuka ikoloni New South Wales. UMthetho avunyelwe ukuba le nyuvesi kufanele ziqondiswe Isigele 20 amadoda kanye uSir William MacGregor, uhulumeni engenayo, waqokwa ishansela kuqala nge Reginald noHebere Roe njengoba likaShansela okuphambene. Uhulumeni House (manje Old Uhulumeni House) e George Street sabekelwa University elandelayo Ukuhamba Governor sokuhlala Bardon Fernberg, isusa i-mpikiswano wokuqala mayelana indawo engcono enyuvesi.
Uyafuna xoxa I-University of Queensland ? Noma yimuphi umbuzo, imibono noma ukubuyekezwa
I-University of Queensland kumephu
Izithombe: The University of Queensland Facebook ezisemthethweni
I-University of Queensland Izibuyekezo
Joyina ukuxoxa The University of Queensland.